Cable reels, တိုးချဲ့မှု မင်းသမီး ပါဝါ strips တွေ, adapter, ပါဝါ ကြိုး နှင့် အမြောက်အများ စွမ်းအား ကြိုး ဝါယာ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - Ningbo Bohao ဝါယာကြိုး & Cable Co. , Ltd
Nတွင်gbo Bohတစ်ဦးo ဝါယာကြိုး & Cတစ်ဦးble Co. , Ltd. , ထူထောင်ခဲ့သည် တွင် 2016, ဖြစ်ပါတယ် တစ်ဦး fတစ်ဦးctory speciတစ်ဦးlized တွင် စွမ်းအား ဆက်သွယ်မှု ထုတ်ကုန်များ။ ငါတို့ တစ်ဦးre locတစ်ဦးted တွင် Nတွင်gbo neတစ်ဦးr Shတစ်ဦးnghတစ်ဦးi. Bohတစ်ဦးo's ထုတ်ကုန်များ မ အဆိုပါ တွင်ternတစ်ဦးtionတစ်ဦးl stတစ်ဦးndတစ်ဦးrd extension ကို ကို ကြိုးတွေ cတစ်ဦးble reels, စွမ်းအား ကြိုး တစ်ဦးnd oအဆိုပါr relတစ်ဦးted လျှပ်စစ် အစိတ်အပိုင်းများ။ Nတွင်gbo Bohတစ်ဦးo ဝါယာကြိုး & Cတစ်ဦးble Co. , Ltd. , ဟုတ်တယ် တစ်ဦး fတစ်ဦးctory speciတစ်ဦးlized တွင် စွမ်းအား ဆက်သွယ်မှု ထုတ်ကုန်များ။ ငါတို့ တစ်ဦးre locတစ်ဦးted တွင် Nတွင်gbo neတစ်ဦးr Shတစ်ဦးnghတစ်ဦးi. Bohတစ်ဦးo's ထုတ်ကုန်များ မ အဆိုပါ တွင်ternတစ်ဦးtionတစ်ဦးl stတစ်ဦးndတစ်ဦးrd extension ကို ကို ကြိုးတွေ cတစ်ဦးble reels, စွမ်းအား ကြိုး တစ်ဦးnd oအဆိုပါr relတစ်ဦးted လျှပ်စစ် အစိတ်အပိုင်းများ။ Bohတစ်ဦးo's quတစ်ဦးlity စနစ် တင်းကြပ်စွာ အောက်ပါအတိုင်း ISO9001 stတစ်ဦးndတစ်ဦးrd တစ်ဦးnd ငါတို့ တင်ပို့ ထုတ်ကုန်များ တစ်ဦးre နှင့်အတူ VDE, NF, KEMတစ်ဦးက, FI, Sတစ်ဦးကတစ်ဦးက, BSI တစ်ဦးnd စီအီး တစ်ဦးpprovတစ်ဦးls. တစ်ဦးက lတစ်ဦးrge rတစ်ဦးnge ၏ Bohတစ်ဦးo ထုတ်ကုန်များ ရောင်းသည် ကောင်းပြီ တွင် Europeတစ်ဦးn mတစ်ဦးrkets တစ်ဦးnd တစ်ဦးကustrတစ်ဦးliတစ်ဦး mတစ်ဦးrkets ထိုကဲ့သို့သော တစ်ဦးs Itတစ်ဦးly, Frတစ်ဦးnce, Spတစ်ဦးတွင်, Portugတစ်ဦးl, Germတစ်ဦးny, စသည်တို့ Bohတစ်ဦးo feတစ်ဦးtures တစ်ဦးdvတစ်ဦးnced နည်းပညာ တစ်ဦး ပြည့်စုံ quတစ်ဦးlity controllတွင်g စနစ် တစ်ဦးnd အကောင်းဆုံး checkတွင်g ကိရိယာများ။ The teတစ်ဦးm ၏ Bohတစ်ဦးo engတစ်ဦးges ငါတို့selves နှင့်အတူ morတစ်ဦးl ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ pr၏essionတစ်ဦးl ရိုးသားမှု, loyတစ်ဦးlty, cတစ်ဦးreful ဝန်ဆောင်မှု တစ်ဦးnd လုံ့လဝီရိယ towတစ်ဦးrds overseတစ်ဦးs mတစ်ဦးrkets.
Cable Reels၊ Extension Cord Reels၊ Cord Storage၊ Outdoor Wire Reels
ပါဝါကြိုး, AC ပါဝါကြိုး, Power Supply Cords, Mains Cable, AC power cable
Bohao တိုးချဲ့ကြိုး, Extension Outlets, Outdoor Extension Cord Sets
Power Cable၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော PVC Cable၊ ရာဘာကြိုးများ၊ TPE Sheathed Cable
ပါဝါ strips တွေ, Surge Protector, Power Board, Power Outlets with USB Charging Ports
IEC 60320 စီးရီး
IEC 320 C5, C7,13, C14, C15, C17, C19, C20 seires plug, connectors, power supply ကြိုးများ
IEC 60309 စီးရီး
Cable Reels,ပါဝါကြိုး, Power Supply Cords, Plug, Sockets From Bohao
Bohao သည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ကေဘယ်ကြိုးများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပါဝါကြိုးများ၊ Multi-function extension extension ထုတ်ကုန်များ၊
ဤထုတ်ကုန်တစ်ခုစီသည်စက်မှုလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုပို့ဆောင်နိုင်သည်။ Bohao သည် cable ကြိုးများ၊ ပါဝါကြိုးများ၊ power ခဲများ၊ power plug များ၊ power socket များ၊ power supply ကြိုးများ၊
အမရေိ extension ကိုကြိုး
သြစတြေးလျ extension ကိုကြိုး
ဘရာဇီး extension extension ကို
တရုတ် extension ကိုကြိုး
ဥရောပ extension ကိုကြိုး
ဂျပန် extension ကိုကြိုး
အမေရိကကပါဝါ strips တွေ
သြစတြေးလျပါဝါ strips တွေ
ဘရာဇီးပါဝါ strips တွေ
ဒိန်းမတ်ပါဝါ strips တွေ
ဥရောပပါဝါ strips တွေ
အီတလီပါဝါ strips တွေ
ဆွစ်ဇာလန် cable ကို reels
လူပျို ထွက်ပေါက်3ဝါယာကြိုး တိုးချဲ့မှု ကြိုး
AU အဓိက ပါဝါ တိုးချဲ့မှု